Loza manambana any atsimo: olona 850 000 tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo | NewsMada
Loza manambana any atsimo: olona 850 000 tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo
Taorian’ny fitsidihana nataony teny amin’ireo distrika iasan’ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (Pam) any amin’ny faritra Androy sy Anosy, nanambara ny talem-paritry ny Pam misahana ny faritra atsimon’i Afrika, i Lola Castro, fa ao anatin’ny loza manambana ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny ankizy madinika sy ny mponina any atsimo, amin’izao fotoana izao. Olona 850 000 no marefo miandry tohana amin’ny sakafo avy amin’ny Pam sy ny mpiray ombon’antoka, manomboka ny volana septambra ho avy izao hatramin’ny volana marsa 2019, raha misy ny vola. Ho voakasika ao avokoa ny tohana sakafo any an-dakilasy, ny fizarana sakafo aorian’ny asa tana-maro, ny fanohanana ny tantsaha eny ifotony.
Sokajina ho efa tafiditra amin’ny dingana fahatelo ny ankamaroan’ny distrika toa an’i Beloha ka ny 50% amin’ny otrikaina (calorie) tokony hoentin’ny sakafo sisa azon’ny isam-batan’olona noho ny antony maro. Nanambara rahateo ny mpamantatra ny toetry ny andro iraisam-pirenena fa hiseho indray, amin’ity fotoam-pahavaratra ity, ny fikorontanan’ny toetr’andro miseho amin’ny El Nino (miakatra ny maripana ambony indrindra ary mihena ny rotsak’orana amin’ny fotoana maharitra) amin’ny firenena maro ka mety ho anisany i Madagasikara. Ho sarotra ny fiatrehana ny maitsoahitra ho avy ho an’ny distrika efa marefo any atsimon’ny Nosy. Raha tsy misy ny asa atao haingana hanampiana ny vahoaka, atahorana hivadika ho loza mihatra indray ho an’ny fianakaviana maro ny tsy fanjarian-tsakafo ka hitondra faisana ny zaza latsaky ny 5 taona ao anatin’ny enim-bolana manaraka.
Miantso ny fanjakana malagasy hihetsika ireo sampandraharahan’ny Firenena mikambana (Pam, Unicef…) efa manao asa hanampiana ny fianakaviana marefo any atsimo. “Vonona hatrany izy ireo hanohana ny governemanta amin’ny fanarenana ny takaitran’ny fiovaovan’ny toetr’andro amin’ny fiharian’ny mponina sy ny fahasalaman’ny ankizy sy ny vehivavy. Mila vola ny fanamafisana ny asa sy fanohizana ny ezaka vita hatramin’izay”, hoy ny solontenan’ny Pam lefitra eto amintsika, i Fatimata Sow Sidibe, tany Taolagnaro,omaly.